डा. गोविन्द केसी पुन अनसनमा
फाइल तस्विर सेरोफेरो९ साउन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसि ११ औँ पटक अनसन बस्दै छन् । उनी संग भएका विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै आज दिउसो देखि अनसन बन्न लागेको जनाइएको छ ।…
भरतपुर १९ प्रकरणमा के गर्ला सर्वोच्चले ?
सेरोफेरो८ साउन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिएको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न सकेन् । पटक पटक सर्दै आएको मुद्दामा साउन २ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलास चल्दै गर्दा रोकिएको थियो । रिटमा सुनुवाई…
माओवादीको 'जम्बो' केन्द्रीय समिति झर्ने भो दुई अङ्कमा
तस्बिर : सेतोपाटी ८ साउन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘जम्बो’ केन्द्रीय समिति कामकाजी नभएको तथा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै समितिको आकार घटाउने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार सम्पन्न बैठकमा उनले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् । बैठकमा…
रणेलाई बचाउन परिवारको आग्रह
धनवीर दाहाल ७ साउन । रुकुम बाँफिकोट गाँउपालिका मग्माका रणे दमाईको दुवै मृगौला फेल भएपछि उनलाई बचाउन परिवारले सबैमा आग्रह गरेका छन् । रुकुमको साविक मग्मा गाविस ३ का ५६ बर्षिय दमाईको आर्थिक अवस्था दयनिय रहेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्टले सम्झिए पुष्पलालको योगदान
सेरोफेरो७ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव तथा संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता पुष्पलाल श्रेष्ठको ३९ औं स्मृति दिवस शनिबार मनाइएको छ । मुलुक भित्र तथा बाहिरका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरी उनका योगदानको स्मरण तथा अभियानको समिक्षा गरिएको छ ।
सालकोटमा दन्त परिक्षण
तस्बिर: रमेशकुमार पाण्डे सेरोफेरो७ साउन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतको आयोजना र मध्यपश्चिम डेन्टल केयर होमको प्राविधिक सहयोगमा एक दिने निशुल्क दन्त परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिका स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालकोटमा शनिबार आयोजना गरिएको परिक्षणमा दुई…
छोरी कुट्ने बाबु सहित पाँच जना विरुद्ध मुद्धा दायर
सेरोफेरो ६ साउन । दलित युवा संग प्रेम सम्बन्ध राखेको निहुँमा छोरी कुट्ने बाबु सहित पाँच जना विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–६, हिडुलीकी १७ वर्षीया मनिता यादवलाई स्थानीय दलित युवा २१ वर्षका दिनेश लोधसँग प्रेम गरेको…
नेवार समुदायले गठामुंगः पर्व मनाउँदै
सेरोफेरो६ साउन, काठमाडौं । नेवार समुदायले आज गठामुंगः पर्व हर्षउल्लासका साथ मनाउदै छन् । साउन कृष्णपक्ष घण्टाकर्ण चतुर्दशीको अवसरमा नेवार समुदायले घर शान्तिको कामना गर्दै घण्टाकर्ण राक्षसलाई धपाउने चलन छ । यस दिनमा नेवार समुदायमा घर…
भारतका १४ औं राष्ट्रपतिमा रामनाथ कोविन्द
सेराफेरो५ साउन । भारतको १४ औं राष्ट्रपतिमा भारतीय जनता पार्टीका नेता रामनाथ कोविन्द निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका उमेदवार कोविन्दले ६५ दशमलव ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी बिहिबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मिरा कुमारले ३४ दशमलव ३५…